အာဆီယံနှင့် သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်တို့မှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် (၉) ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကျင်းပ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး သည် ယနေ့ နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ စတင်၍ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၂၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် စီးပွားရေးဝန်ကြီး များ ဆွေးနွေးပွဲ ၊ (၂၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ပထမအကြိမ် အာဆီယံ-ဗြိတိန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် (၉) ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတို့ကို နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးများသို့ အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၊ သြစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်၊ ရုရှား၊ ကိုရီးယား၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးများတွင် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး ဝန်ကြီးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Dr. Amin Liew Abdullah နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများက စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများက ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ပထမဦးစွာ (၂၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၀န်ကြီး H.E. Dan Tehan MP နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပို့ကုန် တိုးတက်မှုဆိုင်ရာဝန်ကြီး H.E. Phil Twyford နှင့် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများက အာဆီယံ-သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ ထူထောင်ခြင်း သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ သဘောတူစာချုပ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ညှိနှိုင်းမှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အလွန် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်နှင့် ချီလီနိုင်ငံက အဆိုပါသဘောတူစာချုပ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အသစ်အဖြစ် ပါဝင်ရန် အဆိုပြုလာခြင်း ကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆွေးနွေးရာတွင် ဒေသတွင်း၌ အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ သဘောတူစာချုပ်အား အသုံးပြုမှု နည်းပါးနေသေးသည့်အတွက် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသည် အရေး ကြီးကြောင်း၊ သဘောတူစာချုပ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ မတိုင်မီ ပြီးစီးနိုင် ရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ချီလီနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု ဒေသ သဘောတူစာချုပ်သို့ အဖွဲ့ဝင် အသစ်အဖြစ် ပါဝင်ရန် အဆိုပြုလာခြင်းအပေါ် ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် စီးပွားရေး အထောက် အကူပြု အစီအစဉ်အတွက် ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့၏ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၂၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. KAJIYAMA Hiroshi နှင့် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများက အာဆီယံ-ဂျပန် ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုသဘောတူ စာချုပ်အောက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် ဆောင်ရွက်သည့် အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံက အဆိုပြုလာသည့် အာဆီယံ-ဂျပန် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ASEAN-Japan Priority for Innovative and Sustainable Growth) တို့အပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အာဆီယံ-ဂျပန် မဟာဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ၁၀ နှစ်တာ လမ်းပြမြေပုံ၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု အစီအစဉ်များ၏ တိုးတက်မှုတို့အပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ပြန့်လာမှုနှင့် အတူ ရာသီဉတု ပြောင်းလဲမှု၊ စွမ်းအင်ဖူလုံရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ ရှားပါးလာမှု ကိစ္စရပ်များသည် ယှဉ်တွဲ၍ စိုးရိမ်မှု များ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံက အဆိုပြုထားသည့် အာဆီယံ-ဂျပန် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ဦးစားပေးအစီအစဉ် အောက်တွင် ပါဝင်သည့် နယ်ပယ်များသည် ကိုဗစ် - ၁၉ အလွန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါ အဆိုပြုချက်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ပထမအကြိမ် အာဆီယံ-ဗြိတိန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Rt Hon Elizabeth Truss MP နှင့် အာဆီယံ စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများက အာဆီယံ-ဗြိတိန် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံနှင့်ဗြိတိန်တို့အကြား အနာဂတ် အာဆီယံ-ဗြိတိန် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ပူးတွဲကြေညာချက်ကို ဝန်ကြီးများက အတည်ပြုခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အာဆီယံနှင့် ဗြိိတိန်နိုင်ငံတို့အကြား မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်နိုင်ခြင်းအပေါ် ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မှုများအပေါ် ကုစားနိုင်ရေးနှင့် ဒေသတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့အတွက် အာဆီယံသို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် အာဆီယံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ အကြား ဆောင်ရွက်မည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ညီမျှမှုရှိစေရန် အတွက် အထောက်အကူပြု နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ (၉) ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ရာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်၊ ရုရှားနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့မှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများက ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကြောင့် သက်ရောက်မှုများနှင့် အရှေ့အာရှနိုင်ငံများတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကြောင့် သက်ရောက်မှုများ လျှော့ချရေးအစီအမံများနှင့် အရှေ့အာရှနိုင်ငံများတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါအလွန် ပြန်လည်ထူထောင်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia –ERIA က ပြုစုတင်သွင်းသည့် စာတမ်းတို့အပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကိုဗစ်- ၁၉ ကပ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ကာကွယ်ဆေး သာတူညီမျှရရှိရေး၊ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများစီးဆင်းမှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး တို့သည် အရေးကြီးကြောင်း အလေးပေးပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးအသီးသီးက ထုတ်ပြန်မည့် ပူးတွဲကြေညာချက်များကို ဝန်ကြီးများက အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။